Bụ Visual Studio Code Ihe Kachasị Mma OsX Code Editor Na Ahịa? | Martech Zone
Kwa izu m na-ewepụta ezigbo enyi m, Adam Obere. Adam bu ezigbo onye Mmepụta… o mepụtara ihe niile ikpo okwu ahia ala na nwere ịrịba atụmatụ - ọbụna dị na-agbakwunye kpọmkwem-na-mail nhọrọ maka ya zigara postkaadị enweghị ọbụna na-chepụta ha!
Dị ka m, Adam mepụtara dịgasị iche iche nke asụsụ mmemme na nyiwe. N'ezie, ọ na-eme ya n'ọrụ na ụbọchị ọ bụla ebe m na-arapara emepe izu ole na ole ma ọ bụ karịa. Enweghị m obi ụtọ na ya dịka m na-emebu… mana m ka na-ekpori ndụ.
Anọ m na-eme mkpesa na Adam na agabigala m ihe ndezi koodu ole na ole n'afọ a, na-anaghị anụ ụtọ nke ọ bụla n'ime ha. Ọ na-amasị m ndị editọ koodu nke mara mma nke ọma - ọnọdụ ọchịchịrị dị oke mkpa, nke nwere nhazi akpaaka maka koodu ahụ, ma nwee ọnya akpaaka koodu ahụ, nke na-enyere aka ịchọpụta mmezigharị mmezigharị, yana ikekwe nwekwara ọgụgụ isi iji mezue ka ị na-ede. Ọ jụrụ…
You nwara Microsoft Visual Studio Code?
Kedu? Enweghi m mmemme na nchịkọta akụkọ Microsoft kemgbe m chịkọtara ma lụọ ọgụ iji gbaa C # afọ iri gara aga.
Ee… ị nwere ike itinye ndọtị ndị ahụ na ya… ọ mara mma.
Ya mere, n'abalị ikpeazụ m ebudatara Ihe ngosi Visual StudioMa na-agbapụ kpamkpam. Ọ na-enwusi ọkụ ngwa ngwa na nnọọ mma.
Njirimara gụnyere nkwado maka nbugharị, ịkọwapụta njirisi, imejupụta koodu nwere ọgụgụ isi, snippets, itinye koodu na Git agbakwunyere. Nwere ike ịgbanwe isiokwu, ụzọ mkpirisi keyboard, na ọtụtụ nhọrọ iji mee ya nke gị.
Mgbatị Visual Studio Code
VS Usoro ndọtị na-ahapụ gị ka ị tinye asụsụ, debuggers, na ngwaọrụ gị nwụnye iji kwado arụmọrụ mmepe gị. Extdị ndọtị VS Code na-eme ka ndị na - ede ndọtị banye kpọmkwem na VS Code UI ma tinye ọrụ site na otu API ndị VS Code ji.
Weta Extensions lelee site na ịpị akara ngosi Extensions na Ogwe Ọrụ n'akụkụ nke VS Code ma ọ bụ Lelee: Mgbatị nye iwu ma ị nwere ike iwunye ndọtị site na Visual Studio Code na-enweghị ọbụna ịmalitegharị ngwa ahụ!
Ọ bụrụ na ị gwara m afọ ole na ole gara aga na m ga-mmemme ọzọ na Microsoft Code editọ, Ikekwe m ga-achịrị ọchị… mana lee m!